मेलम्चीको बाढीले होटेल र जग्गा गरेर १५ करोडको सम्पति लगेको पि’डा सुनाउदै एक व्यवसायी ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 17, 2021 AdminLeaveaComment on मेलम्चीको बाढीले होटेल र जग्गा गरेर १५ करोडको सम्पति लगेको पि’डा सुनाउदै एक व्यवसायी ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
मेलम्ची नगरपालिकालाई कामपाको रु दुई करोड सहयोग ! काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत तथा उद्धारका लागि मेलम्ची नगरपालिकालाई रु दुई करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आज नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । गत मङ्गलबार मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले गरेको धनजनको क्षतिपछिको राहत तथा उद्धारका लागि सो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिनुभयो । मेलम्ची काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित नगर हो ।
बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आठ जना बेपत्ता ! वर्षाका कारण आएको बाढीले गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत आठ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । तीन चिनियाँ, तीन भारतीय र दुई नेपालीसहित आठ कामदार बेपत्ता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयबासीको सहयोगमा उनीहरुको खोजी भइरहेको छ ।
निर्माणस्थलमा रहेका ७६ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ र धुलिखेल ल्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । उद्धार भएका सबैको अवस्था अहिले सामान्य छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ, पानी प्रशोधन केन्द्र र मुख्य बाँधमा क्षति नपुगेको विवरण प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको क्याम्पहरु, उपकरणहरु, निर्माण सामग्री, पहुँच सडक र पुल बाढीले बगाएको छ ।
साँझ झण्डै सात बजे आयोजना क्षेत्रमा बाढी पसेको थियो । अम्बाथानस्थित ‘हेडवक्र्स’ भन्दा माथि परिरहेको अबिरल वर्षाको कारण बाढी आएको थियो ।मेलम्चीमा आएको बाढीले आफ्नो होटेल र जग्गा बगाउदा कम्तिमा १५ करोड नोक्सान भएको यी मेलम्ची बासि आफ्नो पिडा यसरी सुनाउछन । मेलम्चीमा गरिएको स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोसः